Kabtanka xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa markii ugu horaysya ka soo muuqday tababarka xulkiisa tan iyo wixii ka danbeeyay koobkii aduunka ee Russia 2018 markaas oo uu go’aan ku gaadhay in uu fasax ka qaato waajibaadkii xulkiisa laakiin hadda Messi ayaa ugu danbayn ku soo laabtay xulkiisa qaranka Argentina si uu iskugu diyaariyo tartanka Copa Amercia 2019.
Lionel Messi ayaa ka soo muuqday xarunta tababarka kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Real Madrid halkaas oo uu tababarkiisii ugu horayay ee soo laabasho kula qaatay ciyaartoyda xulkiisa Argentina.
Lionel Messi ayaan wax safar ah soo galin wuxuuna ka soo dhaqaaqay magaalada Barcelona ee isla dalka Spain wuxuuna soo gaadhay caasimada Madrid kadib guushii iyo wacadarihii uu xalay ka dhigay kulankii Real Betis.
Lionel Messi ayaa qayb ka ah xulka qarankiisa Argentina ee uu hogaaminayo tababare Luis Scaloni kaas oo markii ugu horaysay tan iyo markii uu xilka la wareegay kooxdiisa ku helay Lionel Messi waxayna maanta tababarkii ugu horeeyay ku qaateen xarunta tababarka Real Madrid ee Valdebebas.
Xulka qaranka Argentina ayaa jimcaha kulan saaxiibtinimo la ciyaari doona xulka qaranka Venezuela waxayna kadib kulan kale oo saaxiibtinimo la ciyaari doonaan xulka qaranka waqooyiga Afrika ka dhisan ee Morocco kaas oo la ciyaari doono March 26.
Tababaraha xulka qaranka Argentina ee Luis Scaloni ayaa sheegay in aanu wali go’aan ka gaadhin haddii uu Lionel Messi wada ciyari doono labada kulan ee Venezuela iyo Morocco iyo haddii uu hal kulan ciyaari doono.
Luis Scaloni oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Xili danbe ayaanu go’aansan doonaa haddii uu isagu ciyaarayo hal kulan ama laba, go’aankaas waanu samayn doonaa”.
Tababare Luis Scaloni ayaa markii ugu horaysay tababar siiyay kooxda xulka qarankiisa Argentina oo uu Lionel Messi ka dhex muuqdo wuxuuna rajaynayaa in kabtanka xulkiisu uu wax badan ku soo kordhin doono kooxdii Argentina ee uu horumarka fiican ku soo sameeyay.
Si kastaba ha ahaatee, jamaahiirta xulka qaranka Argentina iyo kuwa khaaska u ah Lionel Messi ayaa soo dhawaynaya in Messi uu ugu danbayn ku soo laabtay kubbada cagta caalamiga ah ee xulka qarankiisa
mastarok2020	Uncategorized	Leave a comment March 19, 2019 1 Minute
HORDHAC: Bournemouth v Manchester United
Manchester United ayaa u safreysa kooxda Brounemouth kulamada 11-aad ee asbuucan horyaalka Premier League.
Kooxda Mourimho ayaa kulamadii dambe aad u natiijo fiicneed, balse dheesha maanta ayay wajaheysa kooxda kaabka ku heysta kaalimaha sare.
Garsooraha: Paul Tierney
Bournemouth ayaa markale weyneysa laacibka Joshua King, kasoo laga dabiibayo dhibaato anqawga ah.
Kabtanka naaadiga Simon Francis ayaa shaki buuxa ku iraa madaama uu qabo dhaawac gumaarka ah iyagoo lasiin doon qiimeyn waqti dambaa oo lagu ogaanayo taam ahaan shihiisa.
Maamulaha Manchester United Jose Mourinho ayaa ku qasban inuu go’aan ka gaaro haddii uu u yeerayo weeraryahanka Romelu Lukaku, kaa oo keydka ahaa kulankii Everton.
Jesse Lingard, oo dib dhaawac uga soo laabtay cayaartaa ayaa xili dambe badal kusoo galay, waxaana la rajeyn doonaa in loogu yeero safka kowaad.
Kabtanka Antonio Valencia ayaa weli ku maqan dhaawac jilibka ah, halka Marouane Fellaini iyo Diogo Dalot ay sido kale ku maqan yihiin kabasho.
Bournemouth ayaa guuleysatay kulankoodii ugu horreeyay Premier League ay la kulmeen Manchester United 2015 laakiin waa guul la’aan shan ciyaar oo isku xigta tan iyo markaa, afar kamida cayaarahaas waa laga adkaaday.
United ayaa badisay labadii kulan ee u dambeysay oo ay booqdeen garoonka Vitality Stadium, waxayna dhaliyeen shan gool halka kaliya laga dhaliyay gool kaliya.
Kooxda lagu naaneyso The Cherries ayaa laga yaabaa iney shaqaba ilaashtaan kulankoodii afaraaf oo xariira markii u horreysay cayaaraha horyaalka sare.
Sido kale waa guuldarro la’aan lixdii dheel ee u dambeysay garoonkooda kulamada horyaalka ( 4 guul, iyo 2 guuldarro ), guuldarrdii u dambeysay waxay kasoo gaartay Manchester united oo 2-0 kaga badisay bishii April.
United ayaa mar kaliya shabaqa ilaashatay horyaalka Premier League xili cayaareedkan – kaliya Fulham ayaa ah kooxda qura ee difaacan weysay goolkooda.
mastarok2020	Uncategorized	Leave a comment November 3, 2018 1 Minute
Marco Verratti oo Xalay Xabsi la dhigay isla markaana wajahaya Ganaax adag
Xiddiga qadka dhexe ee PSG Marco Verratti ayaa xabsi la dhigay balse laga sii daayay kaddib markii la qabtay isagoo cabsan oo kaxeenaya baabuur labo jeer, sida ay sheegayaan warar ka imaanaya dalka Faransiiska
Laacibka reer Talyaani ayaa la joojiyay baabuurkiisa mar uu marayay wadada Paris ring road, saacdaha hore uu subuxii arbacda.
Warsidaha L’Equipe, ayaa sheegaya in tijaabada laga qaaday dhiigiisa laga helay Alkolo dhan 0.49mg/l waana labo laab xadka France ee 0.20mg/l.
25-jirka ayaa la dhigay xabsi wuxuuna wajihi doonaa ganaax dheer oo dhanka baabuur wadista ah.
Naadiga PSG weli kama aysan hadlin xabsigii la dhigay xiddigooda Verratti.
mastarok2020	Uncategorized	Leave a comment November 3, 2018 0 Minutes
Jamaahiirta kooxda Real Madrid oo hal arin ka codsaday Santiago Solari, kahor kulanka Real Valladolid
Jamaahiirta kooxda Real Madrid ayaa ka codsaday macalinka ku meel gaarka ah ee Los Blancos Santiago Solari, inuu ku soo bilaawo kulanka bari ay horyaalka La Liga kula ciyaari doonaan kooxda Real Valladolid da’ayarka reer Brazil Vinícius Jr.
Kooxaha Real Madrid iyo Real Valladolid ayaa bari ku wada ciyaari doono garoonka Santiago Bernabeu kulankooda 11-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Vinícius Jr ayaa markii ugu horeesay kusoo bilaawday shaxda kooxda Real Madrid kulankii Copa del Rey ay kula ciyaareen kooxda Melilla, tan iyo markii uu yimid garoonka Santiago Bernabeu.
Da’ayarka reer Brazil ayaa wuxuu bandhig fiican ka sameeyay kulankan, isagoo sidoo kale caawiyay goolkii 2-aad uu dhaliyay saaxiibkiis Marco Asensio, wuxuuna ku guleestay inuu hantiyo quluubta jamaahiirta.
Hadaba wargeyska “AS” ayaa wuxuu afti ka sameeyay jamaahiirt kooxda Real Madrid si loo ogaado fikirkooda kaga aadan inay doonayaan in tababare Santiago Solari uu ku soo bilaawdo kulanka bari ee kooxda Real Valladolid.
Hadaba natiijada kasoo baxday cod uruurintii la sameeyay ayaa noqotay mid cajiib ah, kadib markii 90% ay u codeeyeen in Vinícius Jr lagu soo bilaawo kulankan horyaalka La Liga.
Jamaahiirta Real Madrid ayaa waxay u codeeyeen xidiga ku haboon inuu ku soo bilaawato kursiga keydka si loogu soo bilaawo Vinícius Jr.
45% jamaahiirta Real Madrid waxay sheegeen Gareth Bale, kaasoo qaab ciyaareed liita muujiyay kulamadii lasoo dhaafay, sidoo kale 35% waxay u codeeyeen inuu noqdo Karim Benzema, halka Marco Asensio uu soo galay booska saddexaad 11%, Isco ayaa isna galay booska 4-aad 9%.
Kadib Messi, Samuel Umtiti oo isna ku soo laabtay tababarka buuxa ee Barcelona
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa shalay ku soo laabtay tababarka buuxa ee kooxdiisa.
Laakiin taageerayaasha Barcelona ayaa maanta helaya war farxad leh kadib markii uu dib tababarka ugu soo laabtay Samuel Umtiti.
Xiddigaan ayaa ka bad baaday inuu maro qaliin uu la maqnaan lahaa waqti dheer, kadib dadaal badan oo kooxdu ay ku bixisay caafimaad qabkiisa ayuu saaka ku soo laabtay tababarka buuxa.
Messi ayaa hiigsanaya inuu taam u noqdo kulanka talaadada dambe ay Barcelona u safrayso Inter Milan, laakiin lama hubo waqtiga Samuel Umtiti uu dib ugu soo laabanayo safka kooxdiisa.
mastarok2020	Uncategorized	Leave a comment November 2, 2018 0 Minutes
“Cristiano Ronaldo Waqtiga Saxda ah ayuu yimid Juventus” – Marcello Lippi
Tababaraha reer Talyaani ee Marcello Lippi ayaa xaqiijiyay in laacibka ku soo guuleystay 5 jeer abaal marinta Ballon d’Or ee Cristiano Ronaldo uu dhaqaaqay kooxda Juventus waqtiga saxda ah.
Marcello Lippi ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu ku tilmaamay in Cristiano Ronaldo uu yimid kooxda Juventus waqtiga loo baahnaa, kadib markii uu kaga soo biiray Real Madrid suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
“Juventus waxay la saxiixatay Cristiano Ronaldo waqtiga saxda ah, saameyntiisu innaba caadi maahan haddii ay la soo saxiixan lahaayeen saddex sano ka hor wuxuun lahaan lahaa saameyn intaan ka yar.
Tababaraha reer Talyaani ee Marcello Lippi ayaa wuxuu intaas kadib ka hadlay macalimiinta shabaha isaga marka laga hadlayo xirfadiisa tababarka ee kubada cagta.
“Waxaa jira macalimiin badan, laakiin kuwa ugu macquulsan ayaa ah Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti iyo Luciano Spalletti, laakiin tababaraha Juventus waa kan ugu dhaw ee aniga i shabaha”.
Si kastaba Cristiano Ronaldo ayaa kaga soo dhaqaaqay kooxda Real Madrid suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay kadib mudo dhan 9 sano uu ku soo qaatay aduun dhan 100 milyan euro.
mastarok2020	Uncategorized	Leave a comment November 2, 2018 1 Minute
Barcelona oo Bahdishay Real Marid kulankii Clasico xili Seddaxley uu Dhaliyay Luis Suarez+SAWIRRO
Kooxda Barcelona ayaa si la yaqaan ugu raaxeysatay naadiga Real Madrid markii ay uga adkaadeen 5-1.
Qeybta hore cayaarta ayaa lagu kala maray 2-0 oo ay ku hogaanimeysay Barcelona waxaana goolka daah furka dheesha u dhaliyay xiddiga Philip Coutinho oo ay dhameystiray kubbad soo martay dhawr baas markii cayaart socotay daqiiqadii 11-aad.
Intaa la aadin nasiinada kulanka Barcelona ayaa la timid goolka labaad kasoo ahaa Rigoore uu dhaliyay Suarez oo lagu go’aamiyay aalada VAR kaddib qalad uu galay daafaca Varane.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe Real Madrid ayaa lasoo shir tagtay cayaar ka duwan qeybtii hore,
Real ayaa la timid goolka Calanka waxaana u dhaliyay Marcelo oo goolka ku hubsaday diib uu soo dhigay Isco.
Sheekada wixii intaa ka dambeyay Barca ayaa la wareegtay maamulka cayaarta Luis Suarez ayaana dhaliyay laba gool oo xariira taasoo uu ku dhameystiray seddaxdleyda uu kulanka ka dhaliyay,
Waxaana ugu dambeyn soo afjaray goolasha lagu xasuuqay Real Madrid Arturo Vidal oo madax ku dhaliyay karoos uu soo dhigay Ousmane Dembele.
Waa guuldarradii seddaxaad oo xariira oo kasoo gaartay horyaalka kooxda Real Madrid taaso mugdi galineysa xilka tababaraha reer Spain.